Qaraxa oo ka dhacay deegaanka Xaawo Cabdi ee wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof oo midkood uu ahaa shaqaale Turki ah, sida ay sheegeen ilo caafimaad.
Qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad ka badan 5 ruux sida ay sheegtay warbaahinta Axadle oo ka gaabsatay inuu bixiyo faahfaahin dheeri ah Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka Digfeer.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka “Saraakiil Cadaan ah oo ku sugan Duleedka Muqdisho” Sarkaal Turki ah ayaa ladilay labo kalena waa la dhaawacay, sida lagu sheegay bayaan la soo saaray Sabtidii.
Sarkaal Turki ah ayaa ladilay labo kalena waa la dhaawacay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay dileen labo askari oo ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka, gaar ahaan laamaha amniga ayaan wali ka hadlin weerarkan, iyadoo ku dhowaad 10 qarax laga soo sheegay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye afartii sano ee la soo dhaafay.
Dhismaha wadadan oo soo bilaabatay 2018, ayaa waxaa maalgelisay dowladda Qatar waxaana la joojiyay sanadkii hore kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ay ku dhinteen ku dhowaad 90 qof, oo ay ku jiraan labo shaqaale Turki ah 28-kii Diseembar, 2019, inkasta oo ay dib u bilaabatay.
axadle 5776 posts
Hakim Ziyech iyo Reece James diyaar ma yihiin?